Masinina famenoana mascara fametahana, milina fanamarihana fisaka - Eugeng
Masinina famenon-molotra Rotary Type Lip
Masinina famenoana mascara Type Push
Masinina famenoana sy famonoana poleta
Masinina mameno nohomboana nohomboana
Masinina famenoana crème swirl
Rotary Type Heating Mixing Mixing Gloss Filling Machine
Masinina famenoana hafanana tokana
Masinina famenoana molotra mandeha ho azy
Andalana famenoana molotra balsom-bolo
Tsipika famenoana lokomena semi-mandeha ho azy
Andalana famokarana lokom-bolo vita amin'ny silika
Fitaovana fanala tonelina mandeha ho azy
Masinina manery vovoka matevina
Masinina fanerena poeta EGCP-08A Auto
Tsipika famokarana vovo-mofo voaendy
Masinina mameno vovoka semi-mandeha ho azy
Masinina mameno vovoka mandeha ho azy
EGPM-30L Cosmetika Powder Mixer
Pulverizer vovoka kosmetika
Masinina fanontana vovoka kosmetika laboratoara
Andalana famokarana mandeha ho azy
Masinina fanamarihana tavoahangy boribory EGRL-200
220 milina fanamarihana fisaka
Masinina fanoratana marindrano EGHL-400
Masinina fanoratana ambany ambany
Eugeng dia mpanamboatra matihanina sy mpamorona milina makiazy ao Shanghai. Miezaka mafy izahay hanatsara izany dia mitombo laza eo amin'ny sehatry ny cosmetika amin'ny alàlan'ny fanatrehana ny filan'ny mpamokatra, ary hanome ny haitao farany sy avo indrindra sy ny haavo farany ho an'ny vahaolana tsara indrindra amin'ny alalàn'ny filan'ny mpanjifa hatrany. Ny masinina lehibe misy antsika dia ny milina famenon'ny molotra, ny mascara fameno, ny fantsika milina famenoana, ny famenoana ny milina, ny molotra famenony, ny famenoana lokomena, ny savony fanosotra, ny famonoana vovoka manosika, ny vovoka malalaka, ny famenoana vovo , milina fanoratana mascara masom-bava sns ..
Ny fiheverantsika ny marika dia "fahasalamana, lamaody, matihanina". Ny fanekena ny mpanjifa ihany no afaka maneho ny lanjanay. Izahay no mametraka ny kalitaon'ny vokatra eo amin'ny toerana voalohany!
Tsipika famokarana vovoka namboarina
Voalohany, fampifangaroana, tanky fampifangaroana 20 set 1L; Ny hafainganam-pandehan'ny fampifangaroana dia azo ovaina; Mora mivoaka ny mpanamboatra mixer; Ny fotoana CW sy ny fotoana CCW dia azo ovaina; Tank afaka 90degree misokatra ho an'ny famoahana mora foana faharoa, extrusion, 1 set 10L tank; Sokiro ...
2020 CBE ao amin'ny booth Shanghai ny N4-H21
Amin'ny taona 2020, manatrika ny foara CBE any Shanghai izahay manomboka ny faha-12-12 Jolay. Mampiseho ny vokatrao lehibe izahay, toy ny masinina famenoana molotra mihodina, masinina famenoana mascara masom-bava karazana, masinina manery vovoka matevina, milina fanoratana marindrano, cosmet ...